Izibani ze-UV ze-UV zokuhlanzwa kwamanzi → i-Acuva
Izibani ze-UV ze-UV - funda ngokusebenza ngempumelelo nangokusebenziseka kalula UKUVUSELELA ubuchwepheshe bokuhlanzwa kwamanzi!
Ungawahlanza kanjani amanzi?
Into yokuqala eza emqondweni wawo wonke umuntu ukuyivumela idlule kokunye i-filtr.
Ukungcola kuzohlala kusihlungi futhi sizohlanzeka amanzi.
Kodwa-ke, yini okufanele uyenze esimweni lapho amanzi abonakala ehlanzekile, futhi ukwakheka kwawo kuqukethe okungaba nobungozi, futhi kube yingozi empilweni yethu amagciwane, amabhaktheriya nezinye izinto eziphilayo?
Ukudlula nje kusihlungi ngeke kusenze lutho. Esimweni esinjalo, amanzi kufanele ahlanzwehhayi ukuhlunga nje.
Ungahlungi amanzi - uwahlanze!
Ukuhlanza, ukwelapha noma ukubulala amagciwane kuyinqubo ebonakala iyinkimbinkimbi engenziwa, ngokwesibonelo, ngokusebenzisa amakhemikhali.
Eziningi zazo zithinta kabi imvelo, ikakhulukazi izinto eziphila emanzini. Asifuni nokuzifaka ubuthi ngamakhemikhali futhi sidle amanzi angathandeki ngephunga elikhumbuza ingaphakathi lekhemisi.
Manje yini ongayisebenzisa?
Ungakwazi i-ozone. Ukwelashwa kwe-ozone kuhlanza ngempumelelo futhi kungathathi hlangothi ekunambithekeni kwamanzi. Kodwa-ke, kunzima ukucabanga nge-ozonation yamanzi ekhaya.
Ngakho-ke, kushesha kangakanani, kushibhile, ngempumelelo, ngendlela evikela imvelo futhi ayinambitheki yokuhlanza amanzi ekhaya… enkanjini, esikebheni sezikebhe, ehhovisi nasesitolo?
Izibani ze-Acuva UV LED
Sikwethulela inkampani ethuthukile kwezobuchwepheshe Acuva. Singumsabalalisi okhethekile futhi oqondile wemikhiqizo ye-Acuva emakethe yasePoland.
Ama-Acuva amakhithi wokuhlanza amanzi asebenzisa Izibani ze-UV ze-UV. Le yimikhiqizo yesizukulwane sakamuva eyenzelwe eCanada.
Ukuhlanzwa kwamanzi ukusebenzisa izinhlelo ze-Acuva kuyinto efanayo Kuphumelela izikhathi eziyi-100 kunokusebenzisa izindlela zokuncintisana.
Ngaphezu kwalokho, ukusetshenziswa kwe- Izibani ze-UV ze-UV yenza imikhiqizo ye-Acuva ibe yisixazululo esifanelekile hhayi kuphela eyasekhaya neyasehhovisi, kodwa futhi enhle yokuhlanza amanzi esikebheni semikhumbi noma esiteshini sezimoto.
Ukuhlanzwa kwamanzi kusetshenziswa i-Acuva UV-LED kusekelwe kulwazi lwakamuva lobuchwepheshe kanye nemvelo kakhulu. Awekho amakhemikhali, njenge-chlorine, angeniswa emanzini.
Isusa 99,9999% wamagciwane amagciwane kanye namagciwane
Amanzi angaphansi kwe-disinfection kuphela, ngenxa yalokho Ama-99,9999% amabhaktheriya, amagciwane nawo wonke amanye amagciwane ayasuswalokho kungadala izinkinga zempilo futhi okuzongena kalula kunoma yisiphi isihlungi samanzi sendabuko.
Basebenzisa izinto zokuhlanza amanzi ze-Acuva UV LED, singawadla amanzi avela emifudlaneni yezintaba nasemachibini ngaphandle kokwesaba ukuthi sizogula ngokusetshenziswa kwamagciwane, amagciwane noma amagciwane ahlala emanzini. Izibani ze-UV ze-UV izobulala amagciwane, kuhl I-SARS-COV-2namagciwane angadala izinkinga zesisu.
Ukuhlanzwa kwamanzi usebenzisa amalambu e-UV-LED akuthinti ukunambitheka kwawo. Amagciwane, amagciwane kanye namagciwane kuyafa, kepha ukwakheka kwamanzi akuguquki. Ayikho into efakwa, ngakho-ke amanzi anambitheka ngokufana ncamashi nalokho ayekwenza ngaphambi kokuba ahlanzwe. Iphunga nombala wayo nakho akuguquki. Isihlanzisi se-Acuva UV-LED asenzi lutho ngaphandle kokuyikhanyisa.
Ukuhlanzwa kwamanzi kuqukethe ukuselapha ngamaza amade amafushane, aphakathi kwama-250 nama-280 nm. Ukuvezwa okunjalo kubangela ukuthi i-DNA yezinto eziphilayo ezihlala emanzini ihlehle. Ngenxa yalokho, amanzi ayahlanzwa. Ama-99,9999% awo wonke amabhaktheriya, amagciwane kanye namanye amagciwane ayafa.
Ubuchwepheshe begciwane obusebenzisa amalambu e-UV njengamanje buyaqhubeka nokuthuthuka futhi buvame ukusetshenziswa ezindaweni ezahlukahlukene zomnotho.
Noma kunjalo, awudingi nokukwazi lokhu, ngoba ukusetshenziswa kwezinhlelo ze-Acuva UV LED kulula kakhulu. Awudingi ukuphatha noma yini eyinkimbinkimbi. Awudingi ukukhumbula noma yini. Ama-Acuva UV LED wokuhlanza amanzi asetshenziswa ngendlela efanayo nompompi ojwayelekile.
Ngaphezu kwalokho, izinhlelo zokuhlanza amanzi ze-Acuva UV-LED zilingana ngosayizi. Zithatha isikhala esincane kakhulu, ngakho-ke zilungele amakharavani, ama-campers kanye nemikhumbi, izikebhe nezikebhe.
Zingasetshenziswa kalula ezindlini zasehlobo, ezitolo, emahhovisi, ezindaweni zokudlela, nasezindlini ezingashadile nezinezindlu eziningi.
Ngokungafani nezihlungi zamanzi, izibani ze-UV-LED cishe azinakekelwa.
Awudingi ukuhlanza noma ukufaka okunye esikhundleni. Akukho okuvalekile. Akudingekile ukulawula izinga lokungcola kusihlungi. Lapha, isibani se-UV-LED sikhanya emanzini.
Ukusetshenziswa kwamalambu we-fluorescent we-LED nakho kuhlanganisa okukhulu komsebenzisi. Kunomphumela omuhle ekusebenzeni ngaphandle kwesondlo kohlelo lonke lokwelashwa kwamanzi.
I-Acuva Arrow 5 UV-LED - isihlanzisi samanzi ngompompi
Impilo yesevisi yeminyaka eyi-10 +
Inewaranti ende nempilo yonke. Ama-bulb avamile adinga ukushintshwa njalo. Izibani ze-fluorescent ze-LED zinewaranti yeminyaka engu-10 +, azishisi, zisebenza ngokushesha ngemuva kokukhanyisa futhi zingashi.
Ngokuphambene namalambu enziwe kubuchwepheshe bendabuko, umkhiqizo we-Acuva UV-LED ubuye ube nobungani bemvelo, njengoba ingekho i-mercury kumalambu e-LED.
Umcibisholo we-Acuva 5 UV-LED - wokuhlanza amanzi
I-UV-LED ibuye isebenzise kakhulu ugesi kunohlelo lwe-UV olususelwa kuma-mercury bendabuko. Izinhlelo ze-Acuva UV-LED ziyashintshwa ukuze zinikwe amandla amabhethri. Zingaxhunywa kumandla kagesi ayi-12V kanye ne-AC DC.
I-Acuva inikeza imikhiqizo eguqulwe cishe kunoma yiluphi uhlobo lokusetshenziswa. Kusuka ezinhlotsheni ezahlukahlukene zokuhlanza amanzi kwe-UV-LED, ungakhetha amadivayisi, isb. Ngomthamo wamalitha ama-5 ngomzuzu nempilo yesevisi engu-900 litres.
I-Acuva Eco NX-Silver UV-LED - isihlanza amanzi ngompompi
Yeka ukukhathazeka ngamanzi asemabhodleleni ku-yacht noma ikharavani yakho. Sebenzisa amanzi angekho emgqeni bese uwahlanze ngaphambi kokuwaphuza usebenzisa uhlelo lwe-Acuva UV-LED lwe-disinfection. Jabulela amanzi kampompi ahlanzekile angenasici esikebheni sakho nase-RV yakho noma ekhaya leholide ngaphandle kwamanzi amakhulu.
I-Acuva Eco NX-Silver UV-LED
Ukukhetha izinhlelo zokuhlanzwa kwamanzi Acuva I-UV-LED ukhetha imikhiqizo esezingeni eliphakeme kakhulu enikezela ngamanzi ahlanzekile, angenamanzi ekhaya lakho, esikebheni noma emotorhome.
Izibani ze-UV LED vs. Izibani ze-UV
Inqubo ejwayelekile yokwelashwa kwamanzi ye-UV isebenzisa amalambu e-UV e-mercury. Kodwa-ke, kunokukhathazeka okungathi sína mayelana nomthelela kwezemvelo kanye nokulinganiselwa kokusebenza kwamalambu e-UV.
5 / 5 ( 3 amavoti )
acuvaacuva ecoacuva eco uv ledacuva kwaholela UV uhlelo lokuhlanzwa kwamanziacuva uhlelo lokuhlanzwaubuchwepheshe be-acuvaOkuningi ngo-acuva technologies incI-Acuva UV LEDi-acuva uv purifier yamanziacuva amanziisihlungi samanzi se-acuvaacuva uhlelo lokuhlanzwa kwamanziisihlanzamanzi se-acuvaizinhlelo zokwelashwa kwamanzi i-acuvaamalambu e-allegro uvIsibani se-UV seGermicidalIsibani se-UV se-germicidalIzibani ze-Germicidal UV zamanziukuhlanzwa kwamanziUkuthi amalambu e-uv led ayingozi yiniizibani ze-UV ziyingoziamagciwane UV amanziukwelashwa ngamanzi ukubulala amagciwaneukubulala amagciwane amanziizindlela zokubulala amagciwane emanziniukubulala amagciwane amanzi okuphuzaamagciwane UV amanziukubulala amagciwane kwamathangi amanzi okuphuzaukuhlanzwa kwamanzi asekhayaUV kwaholela isibani inzalo amanziamalambu okubulala amagciwanekwaholela futhi UV amalambukwaholela izibani UV ngemisebekwaholela UV izibaniUkubuyekezwa kwezibani ze-UVIzibani ze-UVUV noma amalambu aholwaizibani ze-UV zamanziUV futhi kwaholela amalambuUV kwaholela amalambuUV kwaholela izibani ukubuyekezakwaholela emanziniizibani ze-UV eziholele phambiliizibani ezihamba phambili ze-uvukuhlanzwa kwamanziukwelashwa kwamanzi emvulaukuhlanzwa kwamanzi okuphuzaukwelashwa kwamanzi ezimboniniukusinda ukuhlanzwa kwamanziukuhlanzwa kwamanzi ekhayaukuhlanzwa kwamanzi emthonjeniukuhlanzwa kwamanzi ompompiukuhlanzwa kwamanzi emithonjeniukuhlanzwa kwamanziUkuhlanza i-UVi-ultraviolet purifier yamanziuv kwaholela ekuhlanzeni amanziUV kwaholela ukwelashwa kwamanziizinhlelo zokwelashwa kwamanzi ze-UVUkuhlanzwa kwamanzi okuholwa uvinkampani yokuhlanza amanziyini i-nsf eqinisekisiweamanzi esikebheniamanzi e-motorhomeisibani kwaholela UV isibanikwaholela isibani UV isibani